Préférences manokana. Ka inona no atao hoe fifandraisana salama?
Tsy olon-tokana ve ianao ary mitady Sugarlove®? Sarotra aminao ve ny hihaona amin'ilay olona mety?
Rehefa manana fahasahiranana mahita Sugarlove® dia mora loatra ny ho kivy na mividy ao amin'ireo angano manimba ao anatiny momba ny fifanarahana sy ny fifandraisana. Na izany aza, raha vonona ny hizara ny fiainanao amin'ny mpinamana iray ianao ary maniry ny hanorina fifandraisana maharitra sy mendrika, dia manomboka amin'ny fandalinana ny tianao manokana izany rehetra izany.
Ka inona ny fifandraisana ara-pahasalamana?
Ny fifandraisana salama dia ny fifankatiavan'ireo mpinamana roa mifototra amin'ny: Fifanajana, fifampitokisana, fahitsiana, fanohanana, fahamendrehana / fitoviana, famantarana miavaka, fifandraisana tsara ary fahatsapana filalaovana / fitiavana. Ny dingana voalohany hahitana ny Sugarlove® dia ny famerenana indray ny hevi-diso momba ny fiarahana sy ny fifandraisana izay mety hisakana anao tsy hahita Sugarlove® maharitra. Matetika ianao dia satria mifantoka amin'ny “sary” sy “laza” ka ny "TENA" fa tsy ny Mind & Soul no ataonao lohalaharana!
Ny fonosanao "Makeover" manokana dia misy
Sugarlove® mpanazatra mampiaraka dia vonona ny hanaiky ny fanendrena anao. Izy ireo no tompon'andraikitra amin'ny fanomezana ireo mpampiasa ny "Makeovers" miavaka amin'ny alàlan'ny fanampiana azy ireo handray fanapahan-kevitra tsara na dia mahatsapa ho mampatahotra, menatra, hikorontana na sorena aza izy ireo!
Fanadihadiana sy fanadinadinana mialoha mba hahafahantsika hahatakatra bebe kokoa momba ny hoe iza ianao mba hahafahanao manomana anao amin'ny fivoriana fanahinao.
Azontsika atao ny manana fisafidianana olona tsara fanahy rehefa tonga eo na afaka miara-mandehandeha amin'ilay tranokala izahay.
Hampianarinay anao ny fomba hisafidianana ny fanahy fanahy mifanaraka amin'ny sainao, ny vatanao ary ny fanahinao amin'ny fomba fiainanao.
Aorian'ny fanadinadinana fanadinadinana sy firesaka mba hahafahantsika mahazo misimisy kokoa momba ny safidin'ny olona mpifaninana izay nataonao ary maninona raha te hiomana amin'ny fandinihana ianao.
Araho ny fanadinadinana ifanakalozan-kevitra sy miresaka momba ny zavatra niainanao amin'ny mpanazatra anay mampiaraka, Sugarlove® Guru ary ny serivisy amin'ny ankapobeny.
Ho fisaorana anao noho ny asa nahomby, nangataka anao izahay mba hanoratra fijoroana ho fohy hoentinay hampiasaina ao amin'ny pejinay "Tantara Fahombiazana".